Ukuvelisa ngcono ukutshaya, isihluzo seTofre Cigarette, izinti zobushushu
I-TOFRE HERBAL FILTER YABASEBENZISI BESIGARETI
TOFRE HERBAL Stick FOR HNB COCONCEPT (UKUKHETHWA KOLUDLALO)
TOFRE HERBAL Stick FOR HNB CONCEPT (UKUKHETHWA KWEDELUXE)
YINTONI IZITUKU ZE-TOFRE HEAT HERBAL?
TOFRE Series ubushushu-herbal sticks iimveliso esekelwe ingcamango Heat-Not-Burn, luhlobo olutsha non icuba ekufuneka isetyenziswe kunye nezixhobo zokufudumeza.Kwaye izakhiwo zethu zemveliso zonke zivela kumaqonga etekhnoloji anelungelo lepropathi ezimeleyo.Xa kuthelekiswa ne-HNB Stick yemveli, ngokwamkela imifuno ecocekileyo yendalo kunye nokudibanisa itekhnoloji yencasa yecuba, i-TOFRE ayinako ukubonelela ngamava agqibeleleyo kuphela, kodwa ikwanciphisa izithako eziyingozi kumsi, ngaloo ndlela ibonelela ngeyona ndlela ibalaseleyo kwiimfuno zokunciphisa ubungozi babasebenzisi.
I-TOFRE Herbal Filter yi-epoch-making Cigarette filters enefomula eyodwa enelungelo elilodwa lomenzi wechiza kunye nolwakhiwo olusulungekileyo lwe-herbal capsule, oluphuma kuphuhliso lwetekhnoloji yezityalo ngentsebenziswano yeengcali zonyango lwemiphunga.
Ukwahluke kuzo zonke izihluzi zemveli ezenziwe ngesinyithi okanye izinto zekhemikhali kwimarike, i-TOFRE Herbal Filter yifilitha yokwenyani&kuphela yecuba enesakhiwo esicocekileyo semifuno, esamkela ubume be-capsule kwaye zonke iifomyula ziyahlangabezana nemigangatho yokutya.
I-Herbal Master yehlabathi
I-TOFRE izibophelele ekuveliseni itekhnoloji yezityalo eziluhlaza kunye nenempilo kwicandelo lokunciphisa ingozi yecuba ukususela ekuqaleni kokusekwa kwethu.sidala iimveliso ngokuhlalutya iimfuno kunye nemikhwa yabantu abatshayayo, kwaye sibonelela abatshaya ngeendlela ezinempilo zokutshaya kunye nokukhetha okungcono ngelixa sihlangabezana ngokugqibeleleyo neemfuno zabatshayayo. Kanye njengokuba isilogeni sethu sabhala "Ukusungula ukutshaya ngcono", esi sizathu sokuba sasungulwa kunye nesicwangciso sethu sanaphakade.
IZINTO ZEHERBAL MIHLA
I-TOFRE Stick nganye ingaba ngumsi ngaphezu kwee-puffs ze-15, kwaye isakhiwo esikhethekileyo sobugcisa sisenza ukuba silungele zonke izixhobo zokushisa eziqhelekileyo kwimarike.
I-TOFRE Herbal Filter ingasetyenziselwa ama-cigarette angama-20 ngokuqhubekayo, kwaye isihluzo ngasinye sinokufakwa lula kwi-case yecuba emva kokuba ikhutshwe, ekulungele ukuthwala kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Nokuba i-TOFRE herbal filter yecuba lesintu, okanye i-TOFRE ifudumeza izinti ze-herbal ze-HEAT- NOT- TSHISA ukutshaya.Senza ezi mveliso zikhethekileyo zobuchwepheshe zinelungelo elilodwa lomenzi wechiza zonke zisekwe kulwazi lwethu olunzulu lwazo zonke iintlobo zabantu abatshayayo.I-TOFRE izisa abasasazi bethu uthotho lwe “eyodwa”—–“ epoch-making”——“entsha echaziweyo”——–imveliso ezingcono zokutshaya.
Kwaye sisekwinguqu eqhubekayo.Ngoku, Sinikezela ngamathuba okusasaza kumazwe ali-188 ehlabathi, ngokukhethekileyo nangaphandle kwesiseko.
Yiba liqabane le-TOFRE lendawo kwaye wonwabele izibonelelo eziziswa bubuchwephesha bamayeza obuphucukileyo!